I-Putlocker Alternatives (2020) - Ukusakazwa kwamahhala okungenamkhawulo - Ezokuzijabulisa
I-Putlocker ibe ngesinye sezindawo ezisakazwa kakhulu kwi-inthanethi kwi-inthanethi. Kuyaziwa futhi kudumile ukuthi sekwenze abahlinzeki abaningi be-intanethi abakhulu bavimba ukufinyelela kuyo, okuqala okuncisha abasebenzisi bayo besikhathi eside ukujabulela ukufinyelela kuma-movie nemibukiso ye-TV ngewebhusayithi.
Le nethiwekhi yokusakaza online ihehe abasebenzisi abaningi abafuna ukuthola nokubuka ama-movie wekhwalithi enhle.Njengoba igama lisho, bekuyisiza ukuthola ama-movie agcinwe ekhabetheni okulula ukusakaza kusuka kunoma iyiphi idivayisi.
Abasebenzisi bayo bakwazile ukuthola izigidi zama-movie basebenzise izixhumanisi ezivela eceleni ukusakaza noma ukuzilanda.Kepha, njengoba uPutlocker engasekho, kunezindlela eziningi ezingasetshenziswa kulezi zinsizakalo zokusakazwa ku-inthanethi ezinikeza amanye ama-movie afanayo.
Izindlela ezi-10 ezinhle kakhulu zeKissAnime.ru
Ezinye izindlela ezihamba phambili ze-Putlocker ngo-2020:
Ezinye izindlela ze-Putlocker zibalwe ngezansi.
I-123Movies enye ingosi yokusakazwa ku-inthanethi eyaziwa kakhulu phakathi kwentsha emhlabeni wanamuhla. Ingenye yezindawo ezingcono zokusakaza eziku-inthanethi.Ngaphandle kwama-movie nezinhlelo ze-TV, i-123Movies nayo inohlu lwama-cartoons namadrama ngaphandle kwama-movie nezinhlelo ze-TV ezikwenza ihluke kwamanye amasayithi okusakaza online.
Konke okuqukethwe kunikezwa amaqembu angaphandle angaxhunyanisiwe okwenza ama-123Movies okungenani abe semthethweni ngandlela thile.Akunasidingo sokubhalisela ukuqala ukubuka futhi isiza sinezikhangiso ezimbalwa kunamasayithi amaningi okusakaza mahhala.
I-GoMovies ikuvumela ukuthi ukhethe phakathi kwezakhiwo ezimbili ezihlukene zekhasi eliyisiqalo.Ikhasi eliyisiqalo elizenzakalelayo liyi-clutter futhi lifaka nomsebenzi wokusesha futhi.Futhi, kunenkinobho engakuyisa kusakhiwo esidala sesayithi.
Ungavele uhlunge ama-movie ngokuhamba phambili, ukukala kwe-IMDb, nokubukwa okuningi.Esinye isici esimangalisayo seGoMovies yimodi yasebusuku.Uma uvula imodi yasebusuku, isayithi liphendukela kumklamo wombala omnyama ophelele kubathandi bama-movie asebusuku kakhulu.
IPopcornflix iyisiteji lapho ungabuka khona ama-movie ngaphandle kokusebenzisa imali.Inhloso enkulu yesayithi ukuhlinzeka abasebenzisi bayo ngokufinyelela kuwo wonke ama-movie amasha ngekhwalithi emangalisayo.I-Popcornflix inezinhlobo zonke ze-movie kusuka esenzweni kuya kumahlaya kuya ku-sci-fi kwezothando nakho konke, nawo wonke ama-movie atholakala kusayithi ngolimi lwawo lwangempela.
Uma ungaqiniseki ukuthi yini okufanele uyibuke futhi udidekile ngokufanayo, ungasebenzisa uhlu olude lwezigaba ukuthola ama-movie amangalisayo ongawathanda.Lapho usuthathe isinqumo sokuthi iyiphi i-movie ofuna ukuyibuka, chofoza kuyo bese ujabulela i-movie yakho.
Umsebenzi wokusesha weSolarMovie unembe ngendlela kunanoma yibaphi abaphikisana nabo.Iphinde yamukele izicelo zokuqukethwe ezingakatholakali kusayithi.
Ikunikeza ukukhetha okubanzi kusuka kubhayisikobho yase-Asia nezinye izihloko zomhlaba jikelele zombili zama-movie nezinhlelo ze-TV.
Uma ufuna isikhombimsebenzisi esibunjiwe kahle, le ngosi yokusakaza online - i-Movie4u inconyelwa kakhulu wena.
Ama-movie nezithonjana zemibukiso ye-TV zihlelwe kahle lapha.I-Movie4u futhi inama-movie amaningi we-HD namafilimu akhishwe ekuqaleni kweminyaka yama-70s.
I-MoviesJoy inesici sebha yokusesha phezulu ekhasini layo eliyisiqalo elingakusiza uthole ama-movie wakho owathandayo nezinhlelo ze-TV.Leli sayithi liqhubeka nokubuyekeza kaningi ngamahithi amasha, futhi liphinde libe nezikhangiso ezimbalwa kunamasayithi amaningi okusakaza mahhala. Ngakho-ke, ngeke ucasuke maduze ngenxa yezikhangiso ezingapheli.
I-MoviesJoy inohlu olubanzi lokuqukethwe kwe-US. Uma ngabe yilokho okufunayo, nakanjani uzokuthola lapha.Le sayithi inesakhiwo esikhangayo okulula ukusisebenzisa futhi sisebenza kahle kunoma iyiphi i-smartphone.
ILos Movies kungenye indlela eya kwaPutlocker okuyindawo yokusakaza yamahhala enikeza izinhlobo eziningi zama-movie nezinhlelo ze-TV ongakhetha kuzo.Ineqoqo elimangalisayo lokuqukethwe kwamazwe omhlaba.
Lapha uzothola amakhasi amaningi emibukiso yamazwe omhlaba nama-movie ngolimi lwawo lwangempela.Iningi lokuqukethwe kolimi lwakwamanye amazwe kuyatholakala ngemibhalo engezansi. Ngakho-ke, awudingi ukukhathazeka uma ungayiqonda i-movie.Futhi, lapho ufuna noma yikuphi okuqukethwe, ungahlela imiphumela ngedethi engezwe, usuku lokukhishwa, isilinganiso, nokuningi.
Ikhasi eliyisiqalo laleli sayithi likukhombisa nokuqukethwe okuthrendayo kwakamuva ukukusiza ukuthi uqalise.Inkinga okukuphela kwayo kuleli sayithi inani elikhulu lama-pop-up ongase uhlangane nalo kusayithi.Uma ufuna ukubuka ama-movie noma yini kumaLos Movies, ngingakuncoma ukuthi uqale uxhume ku-VPN nge-ad-blocker.
8. Bukela Uchungechunge Oluku-inthanethi
Uma ufuna uchungechunge lwe-TV futhi ungakwazi ukuthola uchungechunge lwe-TV olufunayo kwamanye amasayithi, kunethuba elihle lokuthi ungaluthola ku-Watch Series Online.Leli sayithi alinikezi ama-movie, kepha isayithi linemibukiso eminingi ye-TV enezinkathi neziqephu eziphelele.
Futhi, inikezela ngezibuko eziningi, ngakho-ke imvamisa kuba nokuxhumana okungenani okukodwa.Iningi lemibukiso liyatholakala ngekhwalithi ye-HD lapha. Kepha, kuza nezikhangiso eziningi okusobala ukuthi zingacasula kakhulu.
Onke ama-movie aku-Primewire ayatholakala ngezimfanelo ezintathu zevidiyo eziphansi, eziphakathi, noma eziphakeme.Iphuzu elihle ngaleli sayithi ukuthi uyakwazi ukukhetha ezimfanelweni ezahlukahlukene. Ngakho-ke, kukuvumela ukuthi uthokozele i-Primewire noma ungekho ku-Wi-Fi.
Ngakho-ke, awudingi ukuhlala ukhathazeka kakhulu ngemininingwane yakho yanyanga zonke ezosetshenziswa ngokushesha.Inohlu olubanzi lwabaphumeleli be-Hollywood blockbusters ezinhlwini eziningi zama-movie.Okuwukuphela kwephuzu elibi lePrimewire ukwakheka kwalo okuyisakhiwo esiphelelwe yisikhathi.
Abantu abaningi bazama ukuthola enye indlela enhle kaPutlocker. Enye indlela enhle kaPutlocker kufanele ibe nokusebenziseka okuhle komsebenzisi, kufanele isheshe, futhi kufanele ibe neqoqo elikhulayo njalo lama-movie nezinhlelo ze-TV.I-Yesmovies inayo zonke lezi zidingo ngaphandle kokungabaza.
Leli sayithi livame ukuba phakathi kwamasayithi okusakazwa ku-inthanethi okuqala ukufaka i-movie esanda kushaywa.Uma ungabuka noma iyiphi i-movie ngokulungiswa okuphansi nokufiphala, ungabuka i-movie ngaphambi kokuthi ifike kumatiyetha.Yonke imibukiso ye-TV ibhalwe ngezikhathi zayo zonyaka, futhi ungakhetha noma yisiphi isiqephu ofuna ukusibuka ngokuchofoza okulula. Leli sayithi liyisayithi elihle kubo bonke ababukeli bokuzitika ngocansi abangakwazi ukuma ngemuva kwesiqephu esisodwa nje.
Njengoba sonke sazi, uPutlocker wayengomunye wewebhusayithi yokusakaza yamahhala ethandwa kakhulu eyayinama-movie amaningi nezinhlelo ze-TV. Futhi ibinepulatifomu elihlukile ebelivumela abasebenzisi bayo ukuthi balayishe futhi babelane ngazo zonke izinhlobo zamafayela.
Yayidume kakhulu ukuthi yayivame ukuvinjelwa kaningi.UPutlocker uvale ngokuphelele, eshiya abasebenzisi abaningi besayithi bengenayo indlela yokuthola ama-movie abo nezinhlelo ze-TV.Kodwa-ke, sibhale ezinye izindlela zikaPutlocker ezingasetshenziswa esikhundleni sePutlocker ukubuka ama-movie noma imibukiso ye-TV oyithandayo noma kunini lapho ufuna ukuyibuka. Ngokuqinisekile kuzosifanele isikhathi sakho.
I-6 Best VPN yeNetflix - Septhemba 2020
kuthiwani ngobob full movie youtube
ukusakazwa kwe-tv kwamahhala nama-movie
lalela umculo online mahhala ungavinjelwe
imidlalo engavinjelwe yokudlala ku-inthanethi
khetha isikhali sakho esingu-5 singavulelwe
ungaguqula kanjani amavidiyo amaningi we-youtube abe yi-mp3